News - XYTOWER |Iyo Yakanyanya Yakanaka "Scenery" yeKuvaka Simba
XYTOWER |Iyo Yakanyanya Yakanaka "Scenery" yeKuvaka Simba
Seri kwezviedza zvezviuru zvedzimba, kune boka revanhu vasingazivikanwi vari kure nemheremhere yeguta.Vanomuka mangwanani-ngwanani vosviba, vorara mumhepo nechando, kana dikitakuvaka magetsipasi pezuva rinopisa nokunaya kukuru kwemvura.Ndidzo dzakanakisa "scenic spots" pane simba rekuvaka kumberi.
Ndivo vekutanga kupeta maoko.
Kana kuvakwa kwemagetsi emagetsi ekugadzirisa purojekiti inofananidzwa nefirimu, ipapo nzvimbo yekuvaka yekuvaka pasina mubvunzo ndiyo mugadziri wefirimu, uye unofanira kunetseka pamusoro pezvose.Vanhu vanoziva zvakaita basa ravo vanoziva kuti zviri nyore kuenda kunzvimbo yekuvaka pane kuenda kuhofisi.Mukuwedzera kubasa ravo rezuva nezuva, vanopedzera yakawanda yenguva yavo kubasa racho nenzvimbo yokuvaka.Pamazuva evhiki, vanenge vari panzvimbo yeprojekti kana kuti vari munzira kuenda kunzvimbo yeprojekti.
Iyo purojekiti haizononoke, kunonoka, nezvimwewo, uye basa rinofanira kupedzwa mumweya wenguva yekumirira uye pasina kunonoka.
Mutungamiriri webasa ari panzvimbo yekuvaka gore rose kuti atarisire kufambira mberi kwekuvaka.Vanowanzopinda munzvimbo yekuvaka na8 mangwanani, kuverenga vashandi nemidziyo, uye kuronga mabasa ezuva.Dzimwe nguva vanenge vakabatikana kusvika pakati pousiku.
Kunyangwe paine matambudziko mazhinji mukusimudzira chirongwa ichi, nekuedza kwakabatana kwemunhu wese, tinomonera maoko edu uye tinoshanda nesimba, kuchengetedza kubatana kwepedyo nekutarisa, kuvaka uye dhizaini zvikamu, uye tichigara tichimhanyisa kufambira mberi kweprojekiti tichiona kunaka kweprojekiti.
Ndivo "madiki matsvuku" e-on-saiti kuchengetedza manejimendi.Ivo vane basa rekuferefeta dzingangove njodzi dzekuchengetedza, dzidzo yekuchengetedza uye kudzidziswa, kutonga kweakasiyana masosi enjodzi, uye kuronga kwehofisi data.Zuva nezuva, vanovhara nzvimbo yega yega yekuvaka yeJianshui uye vanorekodha yega yega yekudzivirira kuchengetedza.
"Wu" inogona kukwira rack yekugamuchirwa, "Wen" inogona kuvandudza kunyora uye kubata bhizinesi remukati, "Wen Wu" inogona kutanga nechero ruzivo kuti ive nechokwadi chezero tsaona mukuchengetedza kuchengetedza.
Nekuedza kwakabatana kwevanyanzvi vezvivakwa, indasitiri yedu yezvivakwa iri kusimuka zvishoma nezvishoma.Ndivo vakanyanya kunaka "scenery" yekuvaka simba.